China Ginger Powder manufacturing and Factory | Nongchuanggang
Ny vovoka sakamalao dia vita amin'ny sakamalao sakamalao. Satria ny tombo-kase sakamalao dia nahitana fiatraikany lehibe teo amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina amin'ny vatana, noho izany ny fisotroana vovo-sakamalao, mazava ho azy, dia afaka manampy be amin'ny fahasalamana. Noho izany, ny vovo-tsiranoka dia manana famoahana desuperheating, mampiroborobo ny fahazotoan-komana, ny fanoherana ny oksidra, manakana ny fivontosana, ny fahanterana, ny hatsiaka, misoroka ny aretin'ny fihetsika, manatsara ny kalitaon'ny torimaso sy ny lafiny maro amin'ny anjara asa sy ny vokany. Noho izany, ho an'ny fiasan'ny gastrointestinal dia tsy tsara, tsy fahazotoan-komana, soritr'aretina mafy, tsy torimaso tsara, vovoka sakamalao dia karazan-tsakafo sy fanafody tena tsara.
Famaritana ny vokatra vovoka sakamalao: vita amin'ny sakamalao sakamalao. Satria ny tombo-kase sakamalao dia nahitana fiatraikany lehibe teo amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina amin'ny vatana, noho izany ny fisotroana vovo-sakamalao, mazava ho azy, dia afaka manampy ara-pahasalamana lehibe koa. Noho izany, ny vovo-tsiranoka dia manana famoahana desuperheating, mampiroborobo ny fahazotoan-komana, ny fanoherana ny oksidra, manakana ny fivontosana, ny fahanterana, ny hatsiaka, misoroka ny aretin'ny fihetsika, manatsara ny kalitaon'ny torimaso sy ny lafiny maro amin'ny anjara asa sy ny vokany. Noho izany, ho an'ny fiasan'ny gastrointestinal dia tsy tsara, tsy fahazotoan-komana, soritr'aretina mafy, tsy torimaso tsara, vovoka sakamalao dia karazan-tsakafo sy fanafody tena tsara.
Vovoka sakamalaho amin'ny vanin-taona mafana dia misy vokany amin'ny fientanam-po, fihenan'ny maripana marobe, fientanam-batana; Ny vovo-sakamalao dia afaka manafoana ny havizanana, torimaso, tsy fahitan-tory, tsy fahitan-tory, fihenan'ny kibo, fanaintainan'ny kibo ary fambara hafa.
Ny fitambarana gingerol sy diphenylheptane izay matetika misy vovo-sakamalao dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny fanoherana ny okididia sy ny fihenan'ny kolesterola. Vokatry ny fanoherana ny fivontosana; Ny fihinana vovoka sakamalao dia mety hanemotra ny fahanterana, matetika ny be antitra mihinana vovoka sakamalao dia afaka manala ny "tain-tazo".
Ny vovo-sakamalao dia misy fitoviana mitovy amin'ny salicylate sodium, izay mitovy amin'ny loko manify sy anticoagulant amin'ny rà. Ny vovo-sakamalao dia misy fiatraikany manokana amin'ny fampihenana ny lipida amin'ny rà, ny fihenan'ny tosidra, ny fisorohana ny areti-mifindra myocardial ary ny fanemorana ny fahanterana.
Asio vovon-tsakafo vovoka sakamalao ao anaty rano mafana (40 degre eo ho eo) ary atsofohy amin'ny rano mafana mba handemana ny tongotr'ireo marary voan'ny tazo sy sery. Ny vovo-sakamalao dia afaka misoroka araka ny tokony ho izy ny firoboroboan'ny aretina ary misoroka ny tazo sy ny sery. Na tsy manana tazo na sery aza ianao, ny vovo-sakamalao dia afaka manala hatsiaka ihany koa amin'ny alemana amin'ny rano mafana ny tongotrao. Ny vovo-sakamalao dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny gripa.
Isan-karazany Ginger Extract
Karazana fitrandrahana Fanalana solvent
kilasy Kilasin'ny Pharma
Anaran'ny vokatra Takelaka faka-sakamalao
Bika Aman 'endrika Vovoka mavo maivana
famaritana 5% 10% Nosoratan'ny HPLC
Fiainana talantalana 2 taona
Fomba fitsapana HPLC UV
Santionany Azo zahana
Ampahany nampiasaina faka
MOQ 1 Mpg
Fonosana 25kg / amponga
Haben'ny potika 100% Mandalo 80 Mesh
Teo aloha: Ginger voaroba
Manaraka: Ginger organika
Ginger vaovao sy sakamalahoina maina